दुई तिहाईको कथा–नेकपाको ब्यथा !
२०७४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा वर्तमान सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई प्राप्त भएको अपार जनसमर्थनपछिको विजयले लामो समयदेखि अस्थिर र अवरुद्ध मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई गति दिने छ भन्नेमा सबैलाई उत्साहित र आशावादी बनाएको थियो । नेकपाले पाएको भारी बहुमतका साथ शक्तिशाली सरकार गठनका निम्ति प्रकट भएको जनादेशले केही मूलभूत राष्ट्रिय कार्यसूचीहरू प्रष्टरुपमा बोकेको छ ।
तीब्र आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनताको आधारभूत जीवनलाई बदल्ने दिशामा ठोस र प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्ने बर्तमान सरकारलाई उपलब्ध जनादेश र जिम्मेवारी हो ।
तर, सरकारको ध्यान त्यस दिशातिर परिलक्षित भएको महसुस हुँदैन । सरकार गठन भएको ४१८ दिनको गति र प्रस्तुतिलाई हेर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताका आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुँदैछन् । मुलुकको एजेण्डा र प्राथमिकता आधारभूतरुपमा नै फेरिएका छन् । तर, राज्य सञ्चालनको शैली र मानसिकता विल्कुल पुरानै ढर्राको रहेको छ । विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने गहन जिम्मेमवारी बोकेको बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताका न्यूनतम् आवश्यकता (गाँसबास), विगतका सरकारहरूभन्दा न्यूनतमरुपमा पनि भिन्नता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । राज्य सञ्चालनका कुनै पनि मोर्चामा सरकारको उपस्थिति दह्रो र प्रभावकारी देखिंदैन ।
जनताका दैनिक जीवनका कठिनाईहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । तर, सरकारको ध्यान सुधार र सहजीकरण गर्ने प्रयासमा भन्दा भाषण र सोम शर्माको सपना बाँड्नमै केन्द्रित छ । एकातिर सरकारसंग प्राथमिकताको छनोट र कार्यन्वयनको ठोस रणनीतिको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर भनाई र गराईबीचको हास्यस्पद अन्तरविरोधले सरकार भुलभुलैयामा चलिरहेको भान हुन्छ ।
जनभावना र अपेक्षा अनुरुप तीनवटै तहको सरकार चल्न नसक्दा निर्वाचनमा प्राप्त भएको नेकपाको लोकप्रिय छविमा धक्का लाग्न थालेको छ । यसले गर्दा विपक्षीहरूले सरकारप्रति आलोचना र टिप्पणी गर्ने मौका निरन्तर पाइरहेका छन् । अहिलेको सरकार ईतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली र सुविधाजनक स्थितिमा रहेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ । संसद होस् वा सडक प्रतिपक्षको स्थिति नाजुक र प्रभाव शून्य छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा एउटै दल पार्टी (नेकपा)को शक्तिशाली सरकार रहेको अवस्था छ । तर, यी सरकार कुहिरोको काग झैं अलमलमा रहेको भान हुन्छ । सरकारका कमजोरीहरू खुट्याँउदै सही मार्गमा हिंडाउने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६÷६ महिनामा बस्ने वैधानिक ब्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक एघार महिनादेखि बसेको छैन ! समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि योभन्दा दुःखदायी अवस्था के हुन्छ ।
जनताको विश्वासको अभिमतबाट प्राप्त भएको जनादेशलाई ठोस कार्ययोजना र इच्छाशक्तिका साथ ईतिहास निर्माण गर्ने कार्यमा सदुपयोग गर्नुको साटो सरकार निरीह र कमजोर प्रतिपक्षको आलोचना गरेर समय वर्वाद गरिरहेछ । जनताले अपेक्षा गरेको जवाफदेही र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउन सरकार के कुरामा चुकेको छ भन्नेतिर आत्मसमीक्षा गर्नुको साटो प्रतिपक्षको आलोचना गर्नमै समय खर्च गरेको देखिन्छ ।
नेकपाको संयुक्त निर्वाचन घोषणा पत्र अनुसार, ठोस र प्रभावकारी जनपक्षीय कार्यक्रममार्फत सरकारका कमजोर र छवि सुधार्न सक्ने संभावना मौजुद छन् । तर, सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र रवैया जनअपाच्य रहेको छ । जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनाबाट भन्दा शासकीय अहंकारबाट मन्त्रीहरू बढी प्रेरित भएर भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको पाइन्छ ।
सरकार स्वयं जनअपेक्षा र आकांक्षामाथि खरोरुपमा उत्रिनपूर्णत सफल नभइरहँदा जनताको तहबाट उठेका जायज आलोचना र टिप्पणीहरूको संबोधन हुन सकिरहेको छैन ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेले जारी गरेको संयुक्त निर्वाचन घोषणा पत्रमा उल्लेखित जनपक्षीय कार्यक्रमहरू के कति पूरा भए र के कति पूरा हुने अवस्थामा छन् ? नेकपाले यसको समीक्षा गर्ने समय घर्किसकेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई घोर उपेक्षा गरेर सञ्चालित सत्ताको वैधता प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा दिगोरुपमा कायम हुन असंभव छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो श्रेष्ठताको दाबी र औचित्यलाई जीवित राख्नु भनेको संगठनात्मक पद्धतिमा आधारित रहने र जनताको भावना र अपेक्षासंगको अविच्छिन्न सम्बन्ध र साक्षात्कारबाट मात्रै हो ।
लोकप्रियताले आफूसंगै तत्कालीन समय र सन्दर्भमा मुखरित भएका जनताका भावना र आकांक्षालाई बोकेको हुन्छ । जनभावना र आकांक्षा सत्ता सञ्चालनमा प्रतिबिम्बित भएनन् वा तिनको अबमूल्यन भयो भने सत्ताको बैधानिकता र जनादेश गुम्न सक्छ । पार्टीले जनताबाट प्राप्त गरेको जनादेश आवाधिक हो यसलाई सर्वकालिक हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । तर, स्वयं सरकार र सत्तारुढ दलको व्यवहार हेर्दा जवाफदेहिता बिनाको जनादेश सर्वकालिक हुन्छ भन्ने बुझाई देखिन्छ । पार्टी कमिटी र जनताको विश्वास र भरोसामा निरन्तर ह्रास आइरहँदा प्राप्त लोकप्रियता र जनसमर्थन पनि खस्किदै गइरहेको हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।
लोकप्रियताको उचाई जति धेरै हुन्छ जवाफदेहिताको पहाड पनि त्यति नै अग्लो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । जनताले प्रकट गरेको विश्वासको अभिमत कदर भैरहेको छ कि छैन ? पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र, जनआकांक्षा र भावनालाई संवोधन गर्ने दिशामा सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको समीक्षा विधान अनुसार पनि कमसेकम ६÷६ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निरन्तर हुनु पर्ने हो ।
सरकारको काम र परिणामको आधारमा जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । सरकारका नीति र प्राथमिकताहरू जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रति लक्षित छन कि छैनन् भन्ने कुराको एकमात्र मानक जनताले व्यवहारिक जीवनमा कस्तो महसुस गरिरहेका छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
सरकारसंग जनताले के अपेक्षा राखेका थिए त्यसको दैनिक डेलिभरीमा सरकार कुन हदसम्म सफल भयो भन्ने कुराको आधारमा जनताबाट प्राप्त गरेको बैधानिक हैसियत कति कायम छ भन्ने निक्र्योल हुन्छ । जनताको परिवर्तनको तीब्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने भूमिका पूरा गर्न नसक्दा सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेका सरकारहरू पनि क्षणभर मै अलोकप्रिय भएर इतिहास गर्भमा विलुप्त भएका छन् । सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई चेतना भया ।